Izinto ezi-3 omele uzithathe ewe okanye ewe kuhambo | Uhambo olupheleleyo
Ukuhamba kwe-Absolut | 13/12/2021 11:59 | Ukuhlaziywa ukuba 15/12/2021 12:04 | abanye
Ngoku imeko ebangelwa kukufika kobhubhane ibonakala ihamba kancinci ukubuyela esiqhelweniUninzi lwethu luzilungiselela, kwiholide elandelayo, ukuthatha uhambo esinokuzikhupha ngalo kuxinzelelo olungaka kunye namaxhala. Ukwenza oku, kufuneka sicwangcise ngononophelo indlela yabakhenkethi ekufuneka siyilandele ukuze siqinisekise ukudlula kwethu kwi iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi eyona nto ibalulekileyo kwindawo esiya kuyo.
1 Izinto ezi-3 ofanele uziphathe kwisutikheyisi yakho
1.1 Zilungiselele kakuhle iimpahla oza kuzinxiba
1.2 Ungalibali i-elektroniki yakho
1.3 Qinisekisa ucoceko lwakho ngeemveliso zococeko
Izinto ezi-3 ofanele uziphathe kwisutikheyisi yakho
Enye inkalo esifanele sicinge ngayo zizinto esimele sihambe nazo kuhambo lwethu. Maninzi amalungiselelo kangangokuba, amaxesha amaninzi, siyawagqiba ukongamela kunye nokupakisha engalunganga nangomzuzu wokugqibela. Ukuze uthintele olu hlobo lwemeko, siza kukudwelisa ngezantsi izinto ezi-3 ekufuneka uhambe nazo xa usiya kuhambo.
Zilungiselele kakuhle iimpahla oza kuzinxiba
Nangona kucacile, kufuneka sibe nayo Iimpahla ezifanelekileyo ukuya ngokukhululeka kangangoko kwindawo yethu yabakhenkethi. Ngaphaya kwempahla yangaphantsi esiza kuyinxiba, kufuneka silungelelanise ukhetho lwethu nemozulu esiza kuyifumana apho: ukuba uyalinda. amaqondo obushushu asezantsi, lungisa iiglavu, iminqwazi, izikhafu kunye ne sweatshi; ngokuchaseneyo, ukuba uyalinda shushu nyani ngexesha lohambo lwakho, zixhobise nge mfutshane, iihempe kunye nezikipa ezinomkhono weleta. Ukuba kukho ulwandle kufutshane, ungalibali i-swimsuit yakho!
Ukuququzelela ukhetho lweempahla zokuphatha kwi-suitcase yakho, sincoma ukuba ukhethe iiseti zempahla onokuyisebenzisa kwaye utshintshe ngexesha lokuhlala kwakho. Kwimeko apho ukuhlala ixesha elide, hamba kakuhle ngee-T-shirts, ibhulukhwe kunye nezihlangu zazo zonke iintlobo.
Ungalibali i-elektroniki yakho
Inkqubela phambili yezobuchwepheshe eziye zavela kwiminyaka yakutshanje ziye zavelisa intaphane yezixhobo zombane eziluncedo kakhulu. Ukugqitha i efowuni kunye netshaja yayo, kufuneka siqinisekise ukuba siphethe kwisutikheyisi yethu ikhamera, ilaptop yethu kunye nebhetri yangaphandle esinokuthi siyitshaje kwakhona izixhobo zethu xa kunokwenzeka ukuba ibhetri iphelelwe.
Xa uthutha ezi zixhobo, kuya kubaluleka zipakishe kangangoko kunokwenzeka ukuthintela ukuba zingonakali ngexesha lokuthutha. Ukwenza oku, zama ukuzithwala kwibhegi yakho ophetheyo okanye kwibhegi eyahlukileyo ukuqinisekisa ukhuseleko lwazo. Kwimeko apho uziva unyanzelekile ukuba uyithuthe kwisutikheyisi yakho yokubamba, qiniseka ukuba uyayifaka indawo yemithwalo ephakathi.
Qinisekisa ucoceko lwakho ngeemveliso zococeko
Okunokwenzeka kakhulu, xa ufika kwindawo yakho yokhenketho, uya kuba uhlala kwindawo ihotele enika abathengi bayo zonke iintlobo izinto zokucoca. Nangona kunjalo, kwimeko apho ungazi ngokuqinisekileyo ukuba zeziphi ezi zixhobo eziya kubandakanywa nendawo yokuhlala, okanye ukuba uyazi kodwa ezinye izinto ezisisiseko zilahlekile, kuya kufuneka uthathe Ingxowa yobuso kunye nomthwalo ofanelekileyo: ibhrashi yamazinyo, i-deodorant, i-moisturizer, i-wipes, isepha ... njalo njalo.
Ekubeni ziyimveliso yokuqinisekisa i Ucoceko kumalungu ahlukeneyo omzimba wethu, simele siqinisekise ukuba anele ngokwaneleyo igcinwe kakuhle ukuze bangabi mdaka. Kwimeko yeetoti zemveliso, akuyi kuba yimfuneko, kodwa unokufuna ukuzithutha kwiingxowa ezahlukeneyo ukuze uthintele ukubamba. ubumdaka nokufuma.
Nangona ingeyonxalenye yomthwalo, enye yeemveliso onokuthi ube uzolile xa usiya kuhambo ilungile. i-inshurensi yasekhaya Ngayo khusela impahla yakho ekubiweni okunokwenzeka nakwezinye iziganeko ngexesha lakho leholide. Khumbula ukubonisana nezimvo malunga nonikezelo lwepolisi olukhoyo, kwakhona uthelekisa amaxabiso kunye ne-inshorensi yokukhetha, ke, leyo ifanele iimfuno zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Izinto ezi-3 ekufuneka uzithathe ewe okanye ewe kuhambo